Tababare Ralf Rangnick oo ku ammaanay mid ka mid ah xiddigahiisa guushii ay ka gaareen Norwich City – Gool FM
(Manchester) 12 Dis 2021. Manchester United ayaa si dirqi ah guul kaga soo gaartay gool qura oo rigoore ahaa uu u dhaliyay Cristiano Ronaldo kooxda Norwich City oo ay booqatay ku booqatay garoonka Carrow Road, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.
Tababaraha Manchester United ee Ralf Rangnick ayaa ammaanay xoogan ugu qabeeyay goolhayaha kooxdiisa ee David de Gea kaddib guushii ay ka gaareen naadiga Norwich City kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league.
Shabakada BBC Sport ee dalka England ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay tababaraha Manchester United ee Ralf Rangnick kaddib ciyaarta wuxuuna yiri:
“Waxaan u sheegay tababaraha kooxda Norwich City in aysan u ciyaarin sida koox hoos ka hoggaamineysa horyaalka, waxayna u ciyaareen si la mid ah sidii aan u ciyaarnay kulankii Crystal Palace.”
“Qeybtii labaad, waxaan haysanay luuqad jireed oo wanaagsan, laakiin waxaan sii wadnay inaan siino fursado.”
Tababaraha Manchester United ee Ralf Rangnick oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ammaanay goolhayaha kooxdiisa ee David de Gea, wuxuuna yiri:
“Ugu dambayntii, waxa uu ahaa David de Gea kii na siiyay guusha ciyaarta.”
Barcelona oo dhowr ciyaaryahan ka dooneysa kooxda Chelsea